Ny zava-miafin’ny Hazofijaliana
"Kristy nanavotra anay tamin’ny hozon’ny làlana, satria tonga voahozona hamonjy anay Izy; fa voasoratra hoe: Voahozona izay rehetra mihantona amin’ny hazo."Galatiana 3:13
Na dia noekena sy nambara imbetsaka aza ny tsy fanan’I Jesosy tsiny, ny lohandohan’ny firenena jiosy dia nitaky ny hanombohana Azy amin’ny hazofijaliana, toy ny hoe nanao fahadisoana mendrika fahafatesana Izy.
Tsy nanota anefa Jesosy, na dia kely akory aza. Tsy nahalalaota Izy, ary tsy nanana fironana hanota akory, Izy no ilay Masina. Tsy mbola nanao zavatra tsy mety Izy na dia kely akory aza (Lioka 23:41). Nanao izay sitrak’Andriamanitra mandrakariva Izy (Jaona 8:29). Voaozona nefa Izy, tahaka izay mihantona amin’ny hazo (Deoteronomia 21:23). Fihetseham-po manao ahoana re no nameno ny fon’ilay Mpamonjy antsika, Izy Izay nahalala tanteraka ny tenin’Andriamanitra!
Fangirifirina mafy ho Azy koa, Izy ilay hany Marina nony voahombo teo amin’ny hazofijaliana toa olon-dratsy Izy, ka niharan’ny fanarabiana ampahibemaso sy natao ihomehezan’ny valalabemandry!
Ahoana moa Andriamanitra no afaka nangina, nefa tafahoatra toy izany ny hasiaham-pon’ny olona tamin’ny nanomboany Ilay Zanak’Andriamanitra? Tsy nandringana ny zanak’olombelona manontolo Andriamanitra, fa noho ny fitiavany tsy hay refesina, dia Jesosy no nampitondrany teo amin’ny hazofijaliana, tamin’ny nikapohana Azy, ny famaizana ny fahotantsika. Taorian’ireo ora mampivarahontsana ireo dia nihiaka Jesosy hoe: “Vita”, ary natolotra ny fanahiny tamin’Andriamanitra. Nandriaka avy tamin’ny lanivoany notsindronin’ilay miaramila roman any raàny. Nalevina Izy, ary nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo.
Ho ahy sy ho anao no iniatrehan’ny Tompo Jesosy izany rehetra izany. Koa tsy mendrika ny fankasitrahantsika sy ny fitsaohantsika ve Izy?